ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်ဘူးဆိုရင် စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားနဲ့ တခြားအရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ အခွင့်ထူးခံ ဖြစ်နေဦးမှာပဲလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော (ရုပ်သံ)
ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်ဘူးဆိုရင် စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားနဲ့ တခြားအရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ အခွင့်ထူးခံ ဖြစ်နေဦးမှာပဲလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော (ရုပ်သံ)
should do step by step.do not expect 100% atonce.
What the hell step by step. All bad things to us step by step or else?
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဆိုရင် အသက်ကိုတောင် ပဓါန မထားဘဲ ပေးဆပ်ဝံ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ အရာရှိကြီးတွေ တကယ်တမ်းမှာ မိမိအခွင့်ထူးခံ အခွင့်အရေးမြောက်မြားစွာထဲက အစိတ်အပိုင်းနဲနဲလေးကိုတောင်မှ အထိပါး မခံနိုင်တာ.. ဘာကြောင့်လဲ။
တိုင်းသားပြည်သူ ရဟန်း ရှင်၊ လူတွေအပေါ်မှာ ခါးသီးနာကျည်းဖွယ် ပြုကျင့်ဝံ့၊ ပြုကျင့်ရက်ခဲ့တာ ဘယ်သူတွေလဲ။
ဒီလို စိတ်ဓါတ်တွေ ခ၀ါချပြုပြင်ဖို့ဆိုတာ တဆင့်ပြီးမှ တဆင့် သွားစရာမလိုပါဘူး။ စိတ်တွေ ပြောင်းသွားရင် ကောင်းသွားမှာပါ။ ဒီနေ့ကောင်းရင်
မျှတ၊ သမာသမတ်ကျ ရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်ကောင်းလေး အစပြုလိုက်တာနဲ့ ကျန်တာတွေက ကျွဲကူးရေပါ..ပါ။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ကို မြေပေါ်မြေအောက် ၊ ရေပေါ်ရေအောက် (ပြည်သူတွေကိုပါ) သူတို. ပိုင်ဆိုင်တာတွေ ဆိုပြီး လူတစု၊တဖွဲ.က အာဏာရှင် စနစ်နဲ.နှစ်ပေါင်းများ
စွာလက်ဆင်.ကမ်း အုပ်ချုပ်ခဲ.တာပါ ။
တိုင်းတပါးသိမ်းပိုက်ထားလို. ကိုလိုနီဖြစ်နေတာထက်တောင် ပိုဆိုးတဲ.နိုင်ငံအဖြစ်မှာ
မရှိသေးတဲ./ မရသေးတဲ. နိုင်ငံ. လွတ်လပ်ရေးအတွက်
ပြည်သူပြည်သားတိုင်း မှာတာဝန်ရှိလို. ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ်. အချိန်ပါ ။